Ukuphupha iiplantshi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iiplantshi sisixhobo esibalulekileyo esingafanele ukulahleka kuyo nayiphi na ibhokisi yobugcisa. Ngokubanzi inamacandelo amathathu: izibambo, ihenjisi kunye nentloko yesingci. Iindidi zokusetyenziswa okunokwenzeka kwiiplisi zikhulu kakhulu, ezichaza inani elikhulu leentlobo ezahlukeneyo zokucoca. Nokuba ziipayipi, iipleyiti okanye iipleyiti zokugqobhoza, umahluko ayisiyongxaki yabenzi bezinto abanomdla. Ke umntu obekiweyo ume phambi kwesibini sokucoca ngokungathandabuzekiyo kwaye uyazibuza ukuba ingaba yintoni kanye kanye le.
Iiplothi zikwasetyenziswa ngokudibeneyo xa, umzekelo, sithetha ngokuphakamisa umntu. Oko kuthetha ukuba kubeka uxinzelelo olukhulu komnye umntu ukufezekisa injongo yakho oyifunayo. Ephupheni, uphawu lweepinkers lubonakala kunqabile. Nangona kunjalo, kukho ezinye iinguqulelo ezinomdla zalo mfanekiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba sibona iiperi zokucoca ephupheni, olu phawu lwephupha lubandakanya enye kwinkcazo ngokubanzi. Uqikeleloekuyo umntu ophuphayo. Umntu kufuneka alumke ngakumbi xa kufikwa kwizigqibo zokuziphatha kwaye angakwenzi ngokungxama ngaphandle kwemvakalelo yoxinzelelo. Nokuba imvakalelo yokuxinana kwimeko enzima ayonwabanga, ingqondo ephaphileyo iyafuneka apha.
Uphawu lwephupha «iiplisi» uyalumkisa ukuphupha ngaphambi kokwenza izigqibo ezingxamisekileyo. Ukutolikwa kwemveli kukwaqonda iipleyisi njengophawu lobunzima bezezimali kunye neengxaki.
Iiplantshi, ezicofa iphupha enyameni yazo, zinokuba luphawu lokumiselwa Umsebenzi wasekhaya ukuba iqondwe. Abonwabanga kulo mntu kuthethwa ngaye, kodwa kuya kuba nzima ukubalahla.
Ukuba umntu ophuphayo uzibambela into ethile ngeepleyiti, ebomini bokuvuka usenokutyekela ekunyanzeleni izinto ngenkani. Nokuba le ndlela ibonakala ilula kwaye inempumelelo kwasekuqaleni, ngamanye amaxesha iyavela ibe yinto ethe kratya kunokuvula umnyango okungcono.
Ukuba usebenzisa iipleyisi xa usebenza, unokuma amaxesha angonwabanga ngaphakathi endlwini. Ngokwentsingiselo yokutolika, eli phupha linokuba sisalathiso somntu oxhokonxa ubuthongo ebomini bokuvuka. Ngoko musa ukuthabatheka ngumsindo!
Ukuba ubona i-nail clipper ephupheni, mhlawumbi kunye ne-manicure, uhlala ufumana isilumkiso sobubi kunye nobuxoki, obusasazwa ngabanye ngawe. Ukuba ipere ye-tweezers ibonwa kule meko, umntu kufuneka ngokubanzi azi malunga nezinto ezincinci zomcimbi othile.
Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu uziva ephupheni indlela omnye asincina ngayo ngeepleyiti, le meko yephupha yalatha kwelinye ukwenzakala ebomini bokwenyani. Oku kongezwa kumntu ophupha umntu ebengayi kulindela oku kuye. Isiphumo kukudana kunye nemvakalelo yokwaphuka kokuthenjwa. Kule meko, umxholo jikelele wephupha ubalulekile.
Ukhe waxhathisa xa omnye ekubambe ngeeplisi? Le mpendulo ibonisa umntu ochaphazelekayo ukuba bayakwazi ukujongana nabanye kwaye bazikhusele kwiimeko ezisongela ubomi.
Ukuba uhlala uhleli kunye neeplisi nangona kukho iipinki ezibuhlungu, oku kunokukuchaphazela kakhulu. ubuntu bonisa. Iiplothi njengophawu lwephupha zingathanda ukucebisa abo baphupha kule meko ukuba bazikhusele ngcono kwaye baziqonde iimfuno zabo ngakumbi.
Uphawu lwephupha «iiplisi» - ukutolika kokomoya
Kwicala lokomoya lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "iipleyisi" ufuzisela a ukuqhuba uqhuba ngamandla akhe omzimba nawengqondo.
Kanye njengokuba unokusebenzisa uxinzelelo oluninzi ngesibini sokucoca kwaye ngengozi utshabalalise izinto, ukusebenzisa amandla akho ngokuchanekileyo kungakhokelela kwintshabalalo. Nangona kunjalo, abaphuphi bangafunda ukusebenzisa la mandla ngenjongo kwaye bawasebenzise.
Iphupha malunga neAlabaster